Simba Mawiricheya ari Kutengeswa | Wiricheya Yemagetsi - Karman® Tranzit GO
Nyorera kuKarman's® Newsletters kuti uwane Special Offers uye uwane Exclusive Promotions!
musha / Simba Mawiricheya
Simba Mawiricheya & Magetsi Wiricheya ayo anopeta
Yakanakisa Simba Wiricheya
Karman inopa yakasarudzika kusarudzwa kwete kwete chete maWheelchair ePower, asi Akamira Mawiricheya futi. Paunenge uchisarudza yekupedzisira yekufambisa chigadzirwa ichiwedzera simba zvakanyanya inowedzera rusununguko nekuita tekinoroji yedu yazvino kuverengerwa mune zvako zvese zvekufambisa zvaunoda. Nekuda kweizvozvo, maficha edu ekufamba uye kuvimbika zvinokupa iwe ekupedzisira emawiricheya emagetsi anozogara iwe hupenyu hwese hwekuvimbika, kunyaradzwa, uye wekupedzisira kufamba uye nerusununguko.
Kusarudza Wiricheya Yakarurama
Yekutanga kufunga kunoda kuitwa kana uchisarudza wiricheya ndeyekuti cheya chewiricheya kana cheyawiricheya chemanyorerwo chakanyanya kukodzera. Kana iye munhu achange achishandisa wiricheya anoda kukwanisa kuzvimhanyisa kana iye ane muchengeti uyo anogona kubatsira. Dzimwe nguva tekinoroji iyo inopa yakanyanya kuzvimirira inosanganisira simba.
Tarisa uone yedu yekupa yezvigadzirwa uye emagetsi mawiricheya sarudzo uye uzive kuti chiratidzo chakavimbika chinomira kuseri kwekudyara kwako mune yakanakisa simba wiricheya inogoneka.
Mawiricheya emagetsi mune ino chikamu anotanga neakanyanya nyore kufamba anodiwa kune ayo anopa kumira basa. Zvakare, mamwe emamodheru edu anosanganisira kurereka, kutsenhama, nepo mamwe aine manongedzo echinyorwa echimiro chakamira. Zvichienderana nezvido zvako, unogona kuda kutaura kuna chiremba usati wasarudza rakanakisa remagetsi wheelchair kuti rienderane nezvido zvako zvezuva nezuva zvekufamba.
XO-202 Yakamira Wiricheya ndiyo "yepamusoro pemutsara" wiricheya yemagetsi netekinoroji yazvino iripo nhasi. Nesimba rekumira, kutsenhama uye kurerekera sarudzo, zvakare inopa yakamisikidzwa simendi system inopa yakanyanya kugadzikana, kugona uye inoshanda seyakanakisa mukirasi yayo kana ichienzanisa zvirevo mumakwikwi.
Pamusoro pezvo, iyo XO-505 inogona kufananidzwa neakanakisa manyorerwo echinyorwa ane pivot poindi yezvigaro zvemaoko uye ndiyo yega yakagara pawiricheya pamusika nhasi panowanikwa mawrestrests achiwedzera achienda kumashure kwewiricheya sezvo mushandisi akatsenhama. Izvi zvinokurudzira kumira kwakanaka uye zvinopa zvakasikwa armrest positioning kana mushandisi akatsvaga yakanaka yekutsamira kona.
Iwo chete ekumusoro ekupedzisira mamodheru anopa ari nani mota iyo inowanisa iro wiricheya. Chinhu chakanakisa ndechekuti isu tinokwanisa kutora izvi chero kupi uye nekuzviisa nyore nyore mumotokari yedu. Kufambisa mune iyi wheelchair yemagetsi kwawedzera chaizvo rusununguko uye sarudzo.
Kushandisa zvinhu zvakanakisa mukuvaka zvinoderedza huremu pasina kupa simba furemu. Ese edu erechairchairchair anopa ratidziro yekupedzisira, kutenderera kweropa kuri nani, rubatsiro mukurara, uye kutakurika.
Magetsi Wiricheya - Wiricheya ine mota
A wheelchair yemagetsi mudziyo wekufambisa unofambiswa nebhatiri inobvumira mushandisi kushandisa joystick kusimudzira chigaro chakatenderedza. Paunenge uchitsvaga wiricheya ine mota inotengeswa, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti ndeupi rudzi rweiyo poindi yemitengo uye maficha aunoda kuti uite hupenyu hwako huve nyore.
Wiricheya yemota yakajairika kazhinji ine furemu inorema, izvo zvinoita kuti zvikuomere kuti uchengete nekutakura uchitenderera. Nekuda kweizvi, takave nechokwadi chekugadzira maturu edu emota kuti ave akareruka sezvinobvira. Izvi zvinoreva kuti cheya ine zviyero zvakafanana nezvimwe zvigaro zvemagetsi zvine bhenefiti yakawedzerwa yekukwanisa kuipeta nekuichengeta zviri nyore nekuda kwechiedza chayo chakareruka.
Apa ndipo panouya magetsi kana wiricheya yemagetsi. Nekuti iwe unokwanisa kudzora chishandiso ne joystick, iwe une kwakawanda kutonga pamusoro pekuti iwe unofambisa sei chigaro munzvimbo dzakamanikana. Izvi zvinoshanda nekuti unokwanisa kutora nzira dzakasiyana kuenda kunzvimbo dzakamanikana, uchishandisa makona akasiyana kuti ufambe kupfuura mukoridho kana musuwo uye zvimwe zvinhu zvingapinda munzira yako.
Iko zvakare kune kushoma kwekuyedza kufambisa chigaro nekuti urikungoshandisa minwe yako kudzora chishandiso, kusiyana nemagetsi sikuta. Kune zvekare kumwe kufambira mberi kwetekinoroji kana zvasvika pakushanda cheya ine mota. Pane basa ririkuitwa nhasi kubvumira vashandisi kudzora zviri nyore chishandiso nekushandisa muromo kuti ufambe nerurimi rwako, uye nedzimwe mhando dzemberi dzekutungamira.
Power foldable wheelchair inoita musiyano here?
Kufambira mberi kwazvino mu lithiamu tekinoroji kwanyatso shandura nzira yedu yekufamba. Ingotarisa mota dzeEV. Iyo yakanaka EV mota inoyerwa kwete kwete chete iri bhatiri, asiwo iyo yemagetsi dhizaini uye kusimudzira kubva pasi kumusoro. Hapana chimwe cheizvi chakakosha, kana iwe usingakwanise kurongedza kumusoro woenda nacho kwese kwauri kuenda. Yedu TRANZIT GO inoita izvo chaizvo. Iwe unogona zvakare kuda kufunga nezve yakamira wiricheya. Manual propel simba kumira isarudzo kune avo vanoda kukwanisa kuramba vakashinga mukuzvifambisa. Simba rekumira sarudzo inoshanda seyunobatsira uye inobatsira munhu kusimuka. Yako PT inofanirwa kushanda neako ATP kana ekurapa kuti uone kana iro rakawedzera simba rekufamba uye simba ELR kana kukwidziridzwa kwekuzorora kwegumbo uye kutenderera mabasa chinhu chinodikanwa chekurapa kwauri. Ehezve kana bhajeti ichibvumidza, idzi sarudzo dzinogona kugara dzichibatsira kune mumwe munhu anoda kuwedzerwa rubatsiro uye rubatsiro. PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawicheya emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako:
"TENGA MAFASI MASKI IZVOZVI - N95 UCHIPA ZVAKAPEDZISIRA"
VERENGA ZVAKAWANDA PAZVAKATAURWA NA "JAY LENO" - XO-202 YAKAMIRA GWAYIVHURE
LT-980 "KUTENGA KWAKANAKA 13LB * WHEELCHAIR"